गीतकार गुमनाम छः लक्ष्मण सिटौला | newsnepali.com
गीतकार गुमनाम छः लक्ष्मण सिटौला
Published on: Mon, Oct 21st, 2013 By
लक्ष्मण सिटौला साहित्य र सङ्गीतमा धेरै सुनिएको नाम हो । पच्चिस वर्षदेखि साहित्य साधनमा तल्लीन ४५वर्षीय सिटौला पेसागत रुपमा नेपाल वायुसेवा निगमका जागिरे हुनुहुन्छ । सिटौला साहित्यमा एकदमै रूचि राख्नुहुन्छ । नुवाकोट समुन्द्रादेवी–३, पार्थोकमा जन्मनुभएका सिटौलाले धेरै गीत पनि लेख्नु भएको छ । पन्ध्र साहित्यिक कृति लेखिसक्नुभएका सिटौलाले जागिरका सिलसिलामा पूर्व नेपाल बस्दा त्यहीँको वास्तविक वस्तुस्थितिमा आधारित भएर ‘अस्मिता’ भन्ने चलचित्रको लेखन र निर्माणसमेत गर्नुभएको थियो । पछिल्लो पटक आफ्नो तेस्रो गीति एल्बम ‘गीतगङ्गा’ र ‘मीतज्यू’ कृति बजारमा ल्याउनुभएका सिटौलासँग ककनी पोष्टका लागि माधवराज तिवारीले गरेको कुराकानीका अंश –
नेपालमा गीतकारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा गीतकारको अवस्था दयालाग्दो छ । न उनीहरुले टन्न पैसा पाउँछन् न त नाम नै । गीतकारका सिर्जनामा गाउनेहरुदेखि अन्यले मनग्य माम्दानी गर्छन् तर गीतकार सधैँ निरीह बन्न विवश छन् । एउटा गीतको मूल्य मुस्किलले रु तीन सय पाइन्छ तर गायकगायिका त्यही गीत गाउन रु ३० हजारसम्म दाबी गर्छन् । अर्को कुरा, त्यही गीतकारको सिर्जनाले बजारमा तहल्का पिट्छ तर उसको नाम गुमनाम हुन्छ ।
यो अवस्था किन रह्यो त ?
मानिसहरुले सर्जकको महत्वलाई बुझ्न सकेनन् । त्यही सर्जकले सिर्जना नगरिदिए कोही कसरी चर्चित र लोकप्रिय गायक गायिका बन्न सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो समाजले त्यस कुरालाई मनन गर्न सकेको छैन् । तथापि पछिल्लो समय गीतकारलाई पनि न्याय दिने हिसामा केही सुधारका पहल भएका छन् ।
भनेपछि गीत लेखेरै बाँच्ने अवस्था छैन त ?
छैन । बिल्कुल छैन । हाम्रो नेपालमा गीत लेखेरै बाँच्ने अवस्था छैन । बिस्तारै बन्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
तपाई साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्यको विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचनाले मान्छेमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएजसरी आजका रचनाले समाज परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन् । साहित्यको नाममा अश्लीलपन बढ्दै गएको छ । सायद यो समयको माग हो । यद्यपि यसले इतिहास नै बनाउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अहिलेका रचनाहरु पनि समाज रुपन्तारणकै क्रममा आएका हैनन् र ?
सकारात्मक लेखाइको विकास हुनुपर्ने हो तर हाम्रा अग्रजले दिएजस्ता रचना लोप हुँदै गइरहेका छन् । चलेका साहित्यकारले अश्लील साहित्य नलेखे पनि आजका अधिकांश लेखक सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्तो विषयवस्तुमा लेख्न पनि कम्मर कसिरहेका छन् । समाज रुपान्तरणकै क्रममा भनेर समाजलाई जबर्जस्त रुपमा अश्लीलता थोपर्नु राम्रो हैन । यसो हुँदा साहित्यकारहरु अलि बढी पैसा र नामको भोको भए कि भन्ने लागेको छ ।
अश्लीलताले तपाईंहरुलाई पनि अप्ठेरो पारेको छ ?
हामी पनि यही क्षेत्रका मान्छे भएकाले बजारमा निस्किएका सबैखाले पुस्तक अध्ययन गर्र्नुपर्छ । अवश्य पनि अश्लील साहित्यले हामीलाई लाजमर्दो बनाउँछ । नेपाली साहित्य कुन मोडमा पुग्ने हो भन्नेमा सधैँ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आयो ।
अश्लीलताले किन पायो बजार ?
यौनिक साहित्य बिपीले भित्र्याएका हुन् । उनले समाजमा पच्ने खालका कृति लेखेका थिए । आज उनकै सिको गर्दै लेख्नेहरुले यसरी साहित्यलाई अश्लील बनाउँदै गएका हुन् तर समाजमा अनेकखाले मान्छेको बसोवास भएकाले उनीहरुको रुचि पनि फरक भएको हो । मलाई यस्ता साहित्यले लामो समयसम्म स्थान पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।
बिक्रीवितरणको दृष्टिले साहित्यको बजार कस्तो छ ?
नेपाली साहित्यको बजार अहिले राम्रो र नराम्रो दुवैको बीचको अवस्थामा छ । पहिलेको तुलनामा पढ्ने बानीको विकास क्रमिक रुपमा बढेको छ र राम्रो कृतिले रामै्र व्यापार पनि गरिरहेको छ ।
तपाईंका कृतिको अवस्था कस्तो छ नि ?
साहित्य लेख्नु एउटा पाटो हो भने लेखिएको साहित्यलाई बजारमा पु¥याउनु अर्को पाटो हो । म जागिरे मान्छे पनि भएकाले सम्पूर्ण समय साहित्यलाई मात्रै दिन पाउँदिन । जे होस् मैले लेखेका कृति छापिएर बजारमा गएका छन्, यसैमा म गर्व गर्छु ।
लेखेरै बाँच्ने अवस्था छ त ?
नेपालमा लेखेरै बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । यदि कसैले म लेखेरै बाँच्न सक्छु भन्छ भने त्यो उसको भ्रम मात्रै हो । पछि त्यो अवस्था आउन सक्ला तर अहिले त्यस्तो छैन ।
तपार्इँले लेख्नुभएका कृतिमध्ये चलेका कुन कुन हुन् ?
मैले ‘कमाण्डरको कथा’ उपन्यास लेखेको थिएँ जुन सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित हो । उक्त कृतिले राम्रो बजार पाएको थियो । ‘नारायणगोपालको जीवनी’ले पनि राम्रो बजार पाएको थियो । अन्य धेरै कृतिले राम्रै बजार पाएका छन् ।
साहित्यको कुन–कुन विधामा तपार्इँको कलम चलेको छ ?
मैले कविता लेखनबाटै साहित्य यात्रा सुरु गरेको हुँ । पछि मैले निबन्ध, उपन्यास, आख्यान, गीत आदिमा बढी कलम चलाएको छु ।
साभारः ककनी पोष्ट साप्ताहिक ।